Muxuu Eric Andre Show Xiliga 5 kuu hayaa? - Wararka Ugu Sareeya
Muxuu Eric Andre Show Xiliga 5 kuu hayaa?
Maxaa Qaybta noogu jira?
Weligaa ma heshay taxane aad jeclayd laakiin saaxiibadaa ay ku majaajiloodeen? Bandhigga Eric Andre waa hal tusaale oo ka mid ah bandhigga xiriiriye la mid ah. Waa barnaamijka aad amakaagto ama aad quudhsato. Bandhigga Eric Andre Show 5 ayaa hadda laga bilaabay telefishinka, ka dib xilliyo badan oo bandhigga hadalka ah ayaa horay loo daabacay.
Bandhigga Eric Andre Show waa taxane majaajillo ah oo sawir-gacmeed oo telefishan ah oo laga sii daayay Maajo 20, 2012, gudaha Mareykanka. Bandhigu waa sheeko-sheeko-helid-yar oo miisaaniyadeed hoose ah oo muujinaya bandhigga ka doodista dabaasha dadka waaweyn. Eric André ayaa martigeliyay bandhigga, kaasoo ay horay u wada qabanqaabiyeen Hannibal Buress iyo Blannibal Buress.
Dhacdo kastaa waxay ku bilaabataa qaybta aasaasiga ah ee bandhigga, kaas oo ka kooban habaynta bandhig-hadal dhaqameed oo ka kooban miis, kursi, iyo qurxin. Mudanayaal iyo marwooyin, waa Bandhigga Eric Andre! wuxuu ku dhawaaqayaa ku dhawaaqaha, marka muusiga hordhaca ah uu bilaabo inuu ciyaaro. Inta lagu jiro wakhtigan, André wuxuu dabaylahaa goobta, isagoo burburiyay asalka, miiska, iyo agabka kale ee jidkiisa. Gacan-qaadayaasha ayaa si degdeg ah uga saara alaabta guriga ee burburay oo ku beddel qaybo isku mid ah ka dib marka ay dhammaato heesta. Halkaa marka ay marayso, Buress, la-shaqeeyaha, guud ahaan waxa uu galaa sacab diirran oo ka imanaya dhagaystayaashu.
André waxa laga yaabaa in uu soo jeediyo hal-ku-dheg isku jira kaftan mugdi ah iyo xaqiiqo-doonnimo. Marka uu dhib kala kulmo wax qabadkiisa, hal-ku-dheggiisu inta badan waxa uu noqdaa mid dagaal badan oo cadhaysan sida Buress uu u majaajiloodo. Bandhigu wuxuu u badan yahay inuu ka koobnaado isku darka wareysiyo caan ah oo la yaab leh iyo skits gaagaaban, muuqaalo kamarado daacad ah, iyo kuwa aan taxane ahayn, iyadoo xoogga la saarayo dhaqanka yaabka leh ee André ee xaaladaha maalinlaha ah.
Marka la eego dhibcaha xidhitaanka, wax qabad nooc ka mid ah ayaa soo muuqda. Soo afjarida bandhigyada inta badan waa riwaayadaha ficillada telefishanka ee dadweynaha-helitaanka, laakiin sidoo kale waxay noqon karaan fannaaniin dhab ah oo qaadaya heesahooda iyaga oo leh qallooc adag, sida kooxda punk Trash Talk oo qabata iyagoo xidhan mugga shoogga xasaasiga ah ama heesaa opera ah oo ciyaaraya halka fanaanka Killer Mike waxay u adeegtaa sidii ninkeeda buunbuunin.
Killer Mike waxa kale oo uu ka soo muuqday qayb dambe, isaga oo ku kacday fannaanka Action Bronson ee qalabka treadmills. Mac DeMarco mar uu sameeyay sida André uu bilaabay qayb lagu magacaabo Attack DeMarco! oo ku salaysan bandhigyada ciyaaraha Japan, kaas oo raxan samurai ah uu ku dhibay DeMarco.
Haddii aad Raadinayso Qaado badan oo majaajillo ah markaa waxaanu kuu soo jeedinaynaa xishood la'aan Adiga Oo Ku Socota Dhammaadkaaga Todobaadka Layaabka Leh.
Eric iyo Hannibal way soo noqdeen! Eric waxa uu ku salaamay Judy Greer iyo Adam Rippon tareenka oo uu saaxiib la noqday jiir lumay oo raadinaya sayidkiisa. Anderson Six, oo ah marti muusik oo biir ah, ayaa sidoo kale ku jira biilka.
Hannibal waxa uu ka baxaa barnaamijka hal qayb iyo badh ka dib oo waxa uu galay nooc mutant ah oo isaga laftiisa loogu magac daray Blannibal.
Eric waxa uu salaamaya Omarion iyo maanka caanka ah Tyler Henry, iyo sidoo kale martida muusiga ee Machine Gun Kelly, iyada oo quudinaysa cayayaanka. Eric wuxuu galay Bench Mensch, kursi Yuhuudi ah oo dadka ka caawiya hawl maalmeedkooda.
Eric wuxuu casuumay Dermot Mulroney iyo Diane Guerrero, iyo sidoo kale Joey Bada$$, oo ah marti muusik oo miisaan culus leh. Lizzo waxay bilaabaysaa taxane la yaab leh.
Mercedes Javid iyo Brenda Song waxaa soo dhaweeyay Eric, kaasoo ciqaabaya Grimes. Waxa kale oo uu siiya qayb acrege ah oo uu u shaqeeyo ee dhintay!
Blannibal wuu ku filan yahay barnaamijka wuxuuna sidoo kale go'aansaday inuu baxo. Eric waxa uu isku arkay xaalad halis ah isaga oo xubin ka ah dambiyada abaabulan. Tiffany Pollard iyo Naya Rivera, iyo sidoo kale martida muusiga ee Big Freedia, waxaa soo dhaweeyay Eric iyo la-shaqeeyaha Lakeith Stanfield.
Luis Guzmán iyo Tia Carrere waxaa soo dhaweeyay Eric. Felipe Esparza waa booqasho joogta ah. Mike Penis wuxuu la soo noqday liiska martida cusub! Rapper Warrior Ninja cusub, JPEGMAFIA, Lil Yachty, MURS, Trippie Redd, iyo Zack Fox ayaa iska kaashaday.
Xiliga 5aad waxa la dhamaystiray isla wakhtiga uu COVID-19 masiibo ahi bilaabmi doono bisha March 2020 Wareysi uu bixiyay Oktoobar 22, 2020, Eric wuxuu ku dhawaaqay in Hannibal Buress uu ka tagi doono taxanaha inta lagu jiro xilli ciyaareedka sababo shaqsi ah dartood, iyo in Blannibal, oo uu sawiray James Hazley, uu qaadan doono booskiisa. Hazley waxaa lagu arkay Craigslist by André.
Kaalay, kaalay Gorfaynta Filimka, Shirqoolkii iyo wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Ma ogtahay sida uu u dhamaanayo Xakamaynta Z Xiliga 2?
Goobaha soo dejinta filimka bilaashka ah iyada oo aan diiwaangelin ama xubin ka ahayn
roblox ciyaaraha aan la xanibin ee dugsiga
filimada cusub ee ugu fiican ee qulqulaya goobaha
maxaa dhacaya markaad kiciso pluto tv
sida looga soo dejiyo youtube faylasha mp3